Ahoana ny fanalana ny tavy amin'ny kibo amin'ny fihazakazahana | Nutri Diet
Toa manjaitra sy mihira izy: miakanjo ny kiraronao ianao, mandehana mihazakazaka ary voila… manomboka fidina kely isan-kerinandro ny fanjaitra eo amin'ny mizana. Na izany aza, Ny fahaverezan'ny tavy amin'ny kibo amin'ny fihazakazahana dia mety ho sarotra amin'ny olona sasany. Izany dia satria izy ireo dia manana ilay fantatra amin'ny hoe fanangonana lipida mahatohitra ao amin'ny vatany. Raha izany no izy, ny fampidirana ireo fiovana amin'ny fanazaran-tena ataonao dia afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao amin'ny kibo fisaka.
Rehefa tsy mamoy ny lanja tadiaviny ireo mpihazakazaka aorian'ny fiofanana am-bolana, dia matetika satria tsy mandoro kaloria betsaka izy ireo. Noho izany diniho ny fanitarana ny fampiofanana anao amin'ny fomba toy izany, handoro kaloria bebe kokoa ary hahatonga ny tavy kibo ho levona.
Fahadisoana iray hafa manakana ny olona maro tsy hahita vokatra amin'ny fihazakazahana dia ny tsy fisian'ny hamafiny. Mba hampihenana ny lanja sy hampihenana ny kibonao amin'ny fihazakazahana dia tsy ho kamo ianao, fa tokony hihazakazaka amin'ny hazakazaka haingana ianao ary hiezaka ny tsy hametraka ny ezaka rehetra amin'ny tongotrao fotsiny. Mihazakazaka amin'ny lohalinao avo amin'ny elanelam-potoana hametraka asa fanampiny amin'ny hozatry ny kibonao izy io, izay toerana anaovan'ny tavy mafy hatoka.
Raha, na eo aza ny fanatanterahana ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo, tsy vitanao ny manafoana ny tavy amin'ny kibo amin'ny fihazakazahana, manoro hevitra anao izahay diniho ny sakafonao hahitana raha mihinana kaloria be loatra ianao. Raha heverinao fa ilaina izany dia mankanisa mpitsabo amin'ny sakafo mba hahitana hoe inona no sakafo tsara indrindra ho anao. Amin'ny ankapobeny, ny fihinanana sakafo voalanjalanja sy ny fihazakazahana intelo isan-kerinandro farafaharatsiny dia ampy hampihena ny lanjantsika na hitazomana azy raha toa ka efa nahatratra ny lanjantsika tsara indrindra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena » Nahoana indraindray no tsy azo atao ny manafoana ny tavy amin'ny kibo amin'ny fihazakazahana?
Fanafody an-trano hanamafisana ny hoditra